Yintoni eyenza i-Stalkers ibulale?
Ulwahlulo lweeStalker luveza luhlobo oluyingozi kakhulu
Akunabo bonke abahlaseli ababulali, kodwa abaninzi ababulali bayisigxina. Ukuqulunqa iziganeko ezahlula i-stalker yobundlobongela kwi-stalker engekho emthethweni. Idatha yesitatisti iyancatshiswa ngenxa yokuba amacala amaninzi aqala njengento yokutshatyalaliswa ngokunyuka kwezobugebengu obunzulu kwaye zihlelwe njengolu hlobo. Ngokomzekelo, isenzo sobugebengu esichukumisa ixhoba iminyaka emibili waza wabulala ngokuqhelekileyo sichazwa ngokuba ngumbulali kuphela.
Ngelixa ingxelo yelizwe iphucula kule ndawo, kukho ukungaphumeleli kwiinkcukacha ezininzi ezikhoyo ngoku. Kungoko kunzima ukufumana iinkcukacha ezilukhuni malunga nokuba bangaphi abantu ababulalayo ngenxa yesiphumo sokuziphatha.
Omnye umba kunye nedatha yangoku kukuba malunga neepesenti ezingama-50 zokulwa nobugebengu obuthathakayo abachazwa ngamaxhoba. Oku kuyinyani ngokuthe ngqo kwiimeko zokutshatyalaliswa phakathi kwamaqabane angqabane okanye xa u-stalker owaziwayo kwixhoba. Amaxhoba angabika ukuba atyhutywe athetha ngezizathu zawo njengoko esaba ukutshutshiswa kwi-stalker okanye inkolelo yokuba amapolisa ayinakunceda.
Ekugqibeleni, i-stalkers ephantsi kwe-nkqubo yecala lolwaphulo-mthetho iye yongezelela ukungqiniswanga kwedatha. Ucwaningo lweeNkqubo zoLungiso lwezobugebengu bobugebengu bobugebengu lubone ukuba i-stalkers iyaqhubeka ihlawuliswa kwaye igwetywa phantsi kokuxhatshazwa, ukwesatshiswa, okanye iminye imithetho ehambelana nayo kunokuba ibe phantsi komthetho ochasayo.
Ngaphambi kowe-1990, kwakungekho mithetho echasayo e-United States. ICalifornia yayingumbuso wokuqala wokuziphatha kakubi emva kwamacala amaninzi atyhilayo okubandakanya ukuzama ukubulala umdlali we-actress u-Theresa Saldana, u-1988 ukubulala ubukhulu be-ESL Ehlanganiswe ngumqeshwa wangaphambili kunye no- Richard Starker , kunye nokubulawa kuka-Rebecca Schaeffer ngo-1989. URobert John Bardo.
Ezinye iindawo zikhawuleza ukulandela ukulandela kwaye, ekupheleni kuka-1993, onke amazwe anemithetho echasayo .
Ukunyathela kuninzi kuchazwe yiNational Institute of Justice njenge "indlela yokuziphatha ejoliswe kumntu othile oquka ngokuphindaphindiweyo (ezimbini okanye ezininzi izihlandlo) ukubonisana okanye ukubonakala, ukuxhatshazwa ngokungaqhelekanga, okanye izityholo, ezibhaliweyo, okanye izityholo, okanye ukudibanisa yayo, eya kwenza umntu onengqiqoyoyikayo. " Nangona ebonakala njengebugebengu kulo lonke elaseUnited States, ukunyathela kunokwahluka ngokubanzi kwinkcazo yomthetho, ububanzi, ulwaphulo-mthetho, kunye nezohlwayo.
Stalker kunye noXhatshazo lwaBantu
Ngoxa i-criminalization of stalking iyingqungquthela, ukuxhoma akuyona into entsha yokuziphatha komntu. Nangona kukho izifundo ezininzi ezenziwa ngokubhekiselele kumaxhoba ama-stalkers, uphando olwenziwe kwi-stalkers lukhulu. Kutheni abantu beba yi-stalkers bunzima kwaye buninzi. Nangona kunjalo, uphando olusandul 'uphando lwangoku lwanceda ukuqonda iindlela ezahlukeneyo zokuziphatha . Olu phando luncedise ekuboniseni abo bahlalutye ababa yingozi kakhulu kwaye ingozi enkulu yokulimaza okanye ukubulala amaxhoba abo. Ulwalamano oluphakathi kwe-stalker kunye nexhoba luye lwabonakalisa into ebalulekileyo ekuqondeni izinga leengozi kumaxhoba.
Uphando lwe-Forensic luye lwaphula ulwalamano kumaqela amathathu.
Abalingani abasenyongweni. Oku kubandakanya amadoda angoku kunye nabangaphambili, abahlali, kunye namakhwenkwe namantombazana.
Bahlobo, amalungu omndeni, kunye nabaziwayo,
Umntu ongazimeleyo oquka amanani karhulumente.
(bona uMohandie, Meloy, Green-McGowan, & Williams (2006). I-Journal of Science Forensic 51, 147-155).
Iqela eliqhelekileyo lamanye amaqabane amaqabane awona manqaku amakhulu kakhulu. Kwakhona liqela apho iingozi eziphezulu zikhona kubadlali bezobudlova. Izifundo eziliqela zifumene ubudlelwane obubalulekileyo phakathi kweqabane elithandanayo kunye nokuhlaselwa ngokwesondo .
UkuCwangcisa iStalker Practice
Ngomnyaka we-1993, ingcali ye-stalker uPaul Mullen, owayengumlawuli kunye nomongameli wezifo zengqondo kwi-Forensicare eVictoria, eAustralia, wenza izifundo ezininzi malunga nokuziphatha kwabadlali.
Uphando lwenzelwe ukukunceda ukuxilonga nokubeka uluhlu lweziqu, kwaye luquka iziganeko ezibangela ukuba ukuziphatha kwabo kube nzima. Ukongezelela, ezi zifundo zaziquka izicwangciso zonyango ezicetywayo.
U-Mullen kunye neqela lakhe lophando beza neentlobo ezintlanu ze-stalkers:
Ukutshatyalaliswa okubanjwayo kubonakala kwiimeko apho kukho ukuphazamiseka okungathandekiyo kolwalamano olusondeleyo, ngokuqhelekileyo kunye neqabane lomtshato , kodwa lungaquka amalungu omndeni, abahlobo kunye nabahlobo basebenzayo. Umnqweno wokuziphindiselela uba yinto enye xa ithemba le-stalker lokubuyisana kunye nexhoba lakhe liyancipha. I-stalker iya kubonisa ukuba isetyenziselwa ukutshatyalaliswa njengendawo endaweni elahlekileyo. Ukunqongophala kunika ithuba lokuqhubeka uqhagamshelana nexhoba. Kwakhona kuvumela ukuba umgcini-zintsi azive ngakumbi ukulawula phezu kwexhoba kwaye unike indlela yokunyamekela ukuzithemba kwe-stalker.
AbakwaStalkers bahlelwa njengabafunayo abasondelene baqhutywa yedwa kunye nokugula kwengqondo. Ziyinto ekhohlisayo kwaye kaninzi zikholelwa ukuba zithandana nomntu ongenalwazi kwaye zivakalelwa kwakhona (i-erotomanic delusions). Abafunayo abasondeleyo ngokubanzi bentlalo kwaye banengqondo. Baya kulandelelanisa oko bakholelwa ukuba ukuziphatha okuqhelekileyo kwintando emibini. Baya kuthenga "uthando lwabo lokwenene" iintyatyambo, bathumele izipho ezisondeleyo baze babhale inani elincinci leencwadi zothando. Abafunayo abasondeleyo bavame ukuqonda ukuba ingqalelo yabo ingacetywanga ngenxa yenkolelo yabo yokuba babelana ngokubambisana kunye nexhoba labo.
Abaxhasi abangenakunyameko kunye nabafunayo abasondelene nabo babelana ngeziganeko ezifanayo kuba bobabini banamathele ekuhlaleni kunye neengcinga zabo abangaziwayo. Ngokungafani ne-stalkers yobudlelane, abatshintshi abangenakukwazi ukujonga ubuhlobo obude obude, kodwa kunokuba kubekho ixesha elincinane elifana nomhla okanye ulwabelana ngesondo esifutshane. Bayaqonda xa amaxhoba abo ewagatya, kodwa oku kuphela kubangelela imizamo yabo yokuwina. Kule nqanaba, iindlela zabo ziba nzima kwaye zisoyike kwixhoba. Ngokomzekelo, inqaku lothando kule nqanaba lingathi "Ndikubukele" kunokuthi "Ndiyakuthanda."
Abagxeki abanomdla bafuna ukuphindezela, kungekhona ubuhlobo, kunye namaxhoba abo. Bahlala becinga ukuba baye bahlaselwa, bahlaziswa, okanye baphathwa kakubi. Bazibona bexhoba kunokuba baxhamle. Ngokutsho kukaMunlen, abahamba ngeentlanzi baxhamla kwi-paranoia kwaye bavame ukuba nooyise abalawula ngokukhulu. Baya kuzincama ukuhlala ngamaxesha ebomini babo xa bexinzeleleke kakhulu. Benza okwangoku namhlanje iimvakalelo eziphazamisayo eziye zabangela amava abo adlulileyo. Baxhamla uxanduva kwiimeko ezibuhlungu eziye zabuhlungu kwixesha elidlulileyo amaxhoba abajolise kulo ngoku.
Njenge-stalker enomsindo, i-predator stalker ayifuni ulwalamano kunye nexhoba lakhe, kodwa kunoko uyafumana ukwaneliseka xa evakalelwa amandla kunye nokulawula amaxhoba abo.
Uphando lubonisa ukuba i-predator stalker yintlobo yobundlobongela obunobundlobongela kwinto yokuba bahlala becinga ukuba baphathise amaxhoba abo, ngokuqhelekileyo ngendlela yesondo. Bafumana uvuyo olukhulu ngokuvumela amaxhoba abo ukuba angabalimaza nanini na. Ngokuqhelekileyo baqokelela ulwazi lwabo malunga namaxhoba abo kwaye baya kubandakanyeka amalungu omndeni amaxhoba okanye oonxibelelwano abaqeqeshiweyo kwihambo yabo yokunyathela, ngokuqhelekileyo ngeendlela ezithile ezikhohlakeleyo.
Ukuguqula nokugula ngengqondo
Akunabo bonke abaxhasi abanengxaki yengqondo, kodwa akuqhelekanga. Ubuncinane ama-50 e-stalkers aphethwe zizifo zengqondo ziye zabandakanyeka ngokubandakanyeka kubulungisa bobugebengu okanye iinkonzo zempilo yengqondo. Bafumana iintlungu ezifana nokukhathazeka komntu, i-schizophrenia, ukuxinezeleka, nokusetyenziswa kakubi kweziyobisi kuba yinto eqhelekileyo yengxaki.
Uphando lukaMunlen lubonisa ukuba amaninzi amanqwelomoya akufanele aphathwe njengabaphuli-mthetho kodwa kunabantu abanobunzima beengqondo kunye nabani na abanesidingo soxanduva lobuchwepheshe.
Abaxhasi bafunwa yi-FBI yezoLwaphulo kwabantwana
Ibhizinisi le-anyanisi kwisiFi seFrench